Enye indlela yokujonga iqela lokujonga kude kuncedo olukude. Emulator.online ▷ 🥇
I-TeamViewer ngokungathandabuzekiyo yeyona nkqubo isetyenziswa kakhulu ekuncedeni kude kwihlabathi, ikwakhona ngenxa yokusebenza kwayo okungafaniyo kuzo zonke iimeko zenethiwekhi (nakwinethiwekhi ye-ADSL ecothayo isebenza ngaphandle kwengxaki) kwaye enkosi kwimisebenzi emininzi eyongezelelweyo njengokuhambisa ifayile ekude. kunye nokuhlaziya okuzenzekelayo okukude (kuluncedo ekuhlaziyeni inkqubo nakwii-PC zabasebenzisi be-novice). Ngelishwa, nangona kunjalo Inguqulelo yasimahla yeQela lokuBona unemida emikhulu: akunakwenzeka ukuba uyisebenzise kwimeko yorhwebo, uhlobo lokujonga uqhagamshelo luyenziwa (ukuqinisekisa ukuba singabasebenzisi babucala) kwaye akunakwenzeka ukwenza i-videoconference okanye umshicileli okude ngaphandle kokuvula iphepha-mvume lomsebenzisi.
Ukuba sifuna ukubonelela ngoncedo olukude okanye ukunceda inkampani yethu ngaphandle kokuhlawula nayiphi na imali, kwesi sikhokelo siza kukubonisa ezona ndlela zigqwesileyo zokujonga iQelaViewer ngoncedo olukude, ke unokulawula nayiphi na ikhompyuter kude ngaphandle kwexesha okanye ixesha.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Iinkqubo zedesktop ekude ukunxibelelana ukude kwikhompyuter
Eyona ndlela ilungileyo yokujonga iQelaViewer
Iinkonzo esiza kukubonisa zona zinokusetyenziswa nakweyiphi na indawo, kubandakanya ingcali: emva koko sinokulawula iiPC kude kwaye ukubonelela ngoncedo lobugcisa ngaphandle kokuhlawula i-euro. Ezi nkonzo nazo zinemiqobo (ngakumbi kwiimpawu eziphambili) kodwa akukho nto inokuthintela inkxaso. Ukulungiselela siza kukubonisa kuphela iinkonzo ezizisiweyo ilula ukumisela njengeQela loJonga Nokuba abasebenzisi abanamava (ukusukela kule ndawo yokujonga, iQelaViewer iseyinkokheli yeshishini).
Elinye iqela leQela lokuBukela elinokulisebenzisa ngoku I-desktop desktop, esetyenziswa ngokukhuphela kuGoogle Chrome kuzo zonke ii-PC kunye nokufaka zombini icandelo leseva (kwi-PC eza kulawulwa) kunye nenxalenye yomthengi (kwi-PC yethu esiza kubonelela ngoncedo kuyo).
Singamisela ngokukhawuleza uncedo olukude ngeChannel yeDesktop ekude ngokufaka isongezelelo kwisikhangeli (sivula indawo yeseva kwaye sicinezela Faka kwi-pc), Ukukopa ikhowudi eyahlukileyo eyenzelwe eli qela kwaye, ukusisa kwiphepha lomthengi kwiqela lethu, ukufaka ikhowudi. Ekupheleni kokuseta, siya kuba nakho ukukhangela idesktop ukubonelela ngoncedo ngokukhawuleza nangokukhawuleza! Sinokufaka icandelo lomncedisi kwii-PC ezininzi kwaye sizigcine kwiphepha lethu lenkxaso phantsi kwamagama ahlukeneyo, ukuze sikwazi ukulawula iikhompyuter ezimbini nangaphezulu ngaphandle kweengxaki. Idesktop ekude yeChannel nayo inokusetyenziswa kwi-smartphone, njengoko kubonisiwe kwisikhokelo Idesktop ye-Chrome ekude ngeselula (i-Android kunye ne-iPhone).
Iperius desktop ekude
Omnye okhuphelayo simahla ukubonelela ngoncedo olukude Iperius desktop ekude, ifumaneka njengekuphela kwesoftware kwiphepha lokukhuphela elisemthethweni.
Le nkqubo iyaphatheka, yazisa nje ukuba iphunyezwe ngokukhawuleza ukuba umncedisi kunye nomxhasi ajongane nokulungela ukuyisebenzisa. Ukwenza unxibelelwano olukude, qalisa inkqubo kwi-PC ukuba ilawulwe, khetha iphasiwedi elula kwicandelo legama elifanayo, ukope okanye usixelele ikhowudi yamanani ekhoyo phezulu kwaye uyifake kwi-Iperius Remote Desktop eqale kwikhompyuter yethu, phantsi kwesihloko ID ukuqhagamshela; Ngoku sicinezela iqhosha lokuDibanisa kwaye ufake ipaswedi, ukuze ukwazi ukulawula ukude kwidesktop kunye nokubonelela ngoncedo olufanelekileyo. Inkqubo ivumela ukuba sizinkqaye ii-ID zethu esixhuma kuzo kwaye sikwabonelela ngazo zonke iindlela zokufikelela ezingalindelwanga (ukukhetha igama lokungena kwangaphambi kwexesha): ngale ndlela kwanele ukuqala inkqubo ngokuzenzekelayo ukunika uncedo kwangoko.
Inkxaso ekhawulezileyo evela kuMicrosoft
Ukuba sinePC ene Windows 10 sinokusebenzisa ngokunjalo isicelo Uncedo olukhawulezayo, efumaneka kwimenyu yokuQala ezantsi ngasekhohlo (jonga igama).
Ukusebenzisa esi sixhobo kulula kakhulu: sivula usetyenziso kwikhompyuter yethu, cofa Uncedo lomnye umntu, ungene ngeakhawunti yeMicrosoft (ukuba asinayo sinokwenza enye kubhabho simahla), kwaye siqwalasele ikhowudi yenethiwekhi kubonelelwe. Ngoku masiye kwikhompyuter yomntu oza kuzimasa, vula i-app yoNcedo olukhawulezileyo kwaye ufake ikhowudi yomqhubi: ngale ndlela siya kuba nolawulo olupheleleyo lwedesika kwaye sinokunika naluphi na uhlobo loncedo, ngaphandle komda wexesha. Le ndlela idibanisa isantya se-RDP kunye nokusebenziseka kweQelaViewer, ukuyenza isixhobo esinconyelwe yiNavigaweb.net.
Ukuba sineekhompyuter ezininzi ezineenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza ezilawula kude, ekuphela kwesisombululo esisimahla nesivulekileyo esinokubheja kuso Inkonzo ye-DW, inokuqwalaselwa ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni.
Le nkonzo inokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwisikhangeli, ubuncinci kwabo banikezela ngoncedo. Ukuqhubeka sikhuphela ifayile ye UMSEBENZI kwikhompyuter (okanye kwiikhompyuter) ukuze uncediswe, uyiqale kunye nePC kwaye uqaphele i-ID kunye negama lokugqitha elifunekayo kunxibelelwano; Ngoku masiye kwikhompyuter yethu, masenze iakhawunti yasimahla kwindawo oyibona ngasentla, kwaye yongeza ikhompyuter nge-ID kunye negama lokugqitha. Ukusukela ngoku ukuya phambili, siya kuba nakho ukubonelela ngoncedo ngokuvula nasiphi na isikhangeli kunye nokungena kwiakhawunti yethu, apho iikhomputha ezilawulwa ngokude ziya kubonakala. Kuba iseva inokufakwa kwiWindows, Mac nakwiLinux Inkonzo ye-DW lolona khetho lulungileyo kwiinkampani ezinkulu okanye abo baneekhompyuter ezininzi.
Ukuba sifuna ukubonelela ngoncedo olulula olukude kubahlobo okanye kusapho sinokusebenzisa nenkonzo esiyibonisayo Umbonisi we-UltraViewer, ifikeleleka kwiwebhusayithi esemthethweni.
Singayithathela ingqalelo le nkonzo njengenye Inguqulelo yeLiteViewer lite, kuba inonxibelelwano olufanayo kunye nendlela efanayo yoqhagamshelo. Ukuyisebenzisa, enyanisweni, vele uyiqale kwikhompyuter ukuze ilawulwe, ikope i-ID kunye negama lokugqitha kwaye uyifake kwinkqubo yenkqubo kwikhompyuter yomncedisi, ukuze ukwazi ukulawula idesktop kude ngendlela enamanzi kwaye ngaphandle kwentengiso windows okanye izimemo zokutshintshela kuhlobo lwePro (konke ukusikelwa umda kweQela lokuBona).
Akukho kunqongophala kwezinye iindlela kwiQelaViewer kwaye kulula kakhulu ukuzisebenzisa kwaye uzilungiselele, nokuba kubasebenzisi be-novice abanolu hlobo lwesoftware (enyanisweni, nxibelelana nje nesazisi sakho kunye negama eligqithisiweyo kumncedisi wethu okude ukuba aqhubeke). Iinkonzo esizibonisileyo ungasetyenziselwa kwimeko yobungcali (ngaphandle kwe-UltraViewer, esimahla ukuba isetyenziselwe wena kuphela), ukubonelela ngenye indlela efanelekileyo kwilayisensi yeQela yokuBona yeShishini.
Ngolwazi oluthe kratya kwiinkqubo zoncedo ezikude, siyakumema ukuba ufunde isikhokelo sethu Ungayijika kanjani kude i-PC ukuze isebenze ukude mi Ukulawula ikhompyuter kwi-Intanethi ukude.
Ukuba endaweni yoko sifuna ukulawula kude iMac okanye iMacBook, sinokufunda inqaku lethu Ulawula njani iMac screen kude.
I-FreeOffice Calc: eyona ndlela ifanelekileyo kwi-Excel
Uyivula njani ifayile ye-CSV ngokuchanekileyo
Uluhlengahlengisa njani useto lwekhamera yewebhu (umahluko kunye nokuqaqamba) kwiPC yeWindows
Uyifaka njani i-Zoom xa ufumana isimemo
Vela kwinkomfa yevidiyo nge-3D avatar ehamba ngathi
Elona lifu lisimahla lokugcina iifayile kwi-intanethi
Yongeza umthetho kwiscreen sakho sePC
Guqula uMKV uye kwi-AVI okanye utshise iMKV kwiDVD
Yenza iifoto zephanorikhi kunye nemifanekiso eyi-360-degree imifanekiso kwi-intanethi nakwikhompyuter yakho
Hlanganisa umculo kwi-PC kunye neenkqubo zamahhala ze-DJ
Chukumisa ikhompyuter yakho yedesktop: Imifanekiso yamaphephadonga eneefolda zekhamera, isikrini se-3D kunye neewijethi
Imakroskopu eyi-3D ebonakalayo kwi-intanethi kwaye simahla ukukhuphela kwikhompyuter yakho